Mwari anotsiura vanhu (1-6)
Tende rekusanganira rinoiswa kunze kwemusasa (7-11)
Mozisi anokumbira kuona kubwinya kwaJehovha (12-23)
33 Jehovha akatizve kuna Mozisi: “Chisimuka uende nevanhu vawakabudisa munyika yeIjipiti. Endai kunyika yandakapikira Abrahamu, Isaka, naJakobho, ndichiti, ‘Ndichaipa vana* vako.’+ 2 Ndichatuma ngirozi mberi kwako,+ ndodzinga vaKenani, vaAmori, vaHiti, vaPerizi, vaHivhi, nevaJebhusi.+ 3 Endai kunyika inoyerera uchi nemukaka.+ Asi handisi kuzoenda ndiri pakati penyu, nekuti muri vanhu vakaoma musoro,*+ zvekuti ndingakuparadzai muchiri munzira.”+ 4 Vanhu pavakanzwa shoko iri rinorwadza, vakatanga kuchema, uye hapana kana mumwe wavo akapfeka zvishongo zvake. 5 Jehovha akati kuna Mozisi: “Udza vaIsraeri kuti, ‘Muri vanhu vakaoma musoro.*+ Ndaigona kutopinda pakati penyu ndikakuparadzai nenguva pfupi.+ Iye zvino musapfeka zvishongo zvenyu ndichimbofunga zvekuita nemi.’” 6 Saka kubvira paGomo reHorebhi zvichienda mberi, vaIsraeri vakarega kupfeka* zvishongo zvavo. 7 Mozisi akabva atora tende rake, akaridzika kunze kwemusasa, kachinhambwe kubva kumusasa, ndokuritumidza kuti tende rekusanganira. Munhu wese ane zvaaida kubvunza Jehovha+ aienda kutende rekusanganira, rakanga riri kunze kwemusasa. 8 Mozisi paaingobuda achienda kutende racho, vanhu vese vaisimuka, vomira pamasuo ematende avo, voramba vakatarisa Mozisi kusvikira apinda mutende racho. 9 Mozisi paaingopinda mutende racho, shongwe yegore+ yaibva yadzika yomira pasuo retende, Mwari achitaura naMozisi.+ 10 Vanhu vese pavaiona shongwe yegore yakamira pasuo retende racho, mumwe nemumwe aisimuka okotama ari pasuo retende rake. 11 Jehovha aitaura naMozisi vakatarisana chiso nechiso,+ sezvinoita munhu achitaura nemumwe munhu. Paaidzokera kumusasa, Joshua+ mwanakomana waNuni, mushumiri uye mubatsiri wake,+ aisabva patende racho. 12 Mozisi akazoti kuna Jehovha: “Onai iye zvino muri kunditi, ‘Tungamirira vanhu ava,’ asi imi hamuna kundizivisa kuti ndiani wamuchandituma naye. Uyewo makati, ‘Ndinokuziva nezita,* uye ndakunzwirawo nyasha.’ 13 Ndapota zvangu, kana mandinzwira nyasha, ndizivisei nzira dzenyu,+ kuti ndikuzivei, uye kuti murambe muchindinzwira nyasha. Yeukaiwo kuti rudzi urwu vanhu venyu.”+ 14 Saka akati: “Ini pachangu ndichaenda* newe,+ uye ndichakuzorodza.”+ 15 Mozisi akabva ati kwaari: “Kana imi pachenyu musiri* kuendawo, musatibvisa pano. 16 Zvingazozivikanwa sei kuti mandinzwira nyasha, ini nevanhu venyu? Handiti kuenda kwenyu nesu+ ndiko kuchaita kuti ini nevanhu venyu tisiyaniswe nevanhu vese vari panyika?”+ 17 Jehovha akaenderera mberi achiti kuna Mozisi: “Ndichaitawo izvozvo zvawakumbira, nekuti ndakunzwira nyasha uye ndinokuziva nezita.” 18 Iye akabva ati: “Ndiratidzeiwo kubwinya kwenyu.” 19 Asi iye akati: “Ndichaita kuti kunaka kwangu kwese kupfuure nepamberi pako, uye ndichazivisa zita raJehovha pamberi pako;+ uye ndichanzwira nyasha wandinoda kunzwira nyasha, uye ndichanzwira ngoni wandinoda kunzwira ngoni.”+ 20 Asi akawedzera kuti: “Haukwanisi kuona chiso changu, nekuti hakuna munhu angandiona akararama.” 21 Jehovha akatizve: “Heino nzvimbo iri pedyo neni. Mira padombo iro. 22 Kubwinya kwangu pakunenge kuchipfuura, ndichakuisa pakati pedombo rakatsemuka, uye ndichakuvharidzira neruoko rwangu kusvikira ndapfuura. 23 Kana ndapfuura ndichabvisa ruoko rwangu, uye iwe uchandiona nechekumashure kwangu. Asi chiso changu hachingaonekwi.”+
^ ChiHeb., “vakabvisa.”
^ Kana kuti “Ndakakusarudza.”
^ ChiHeb., “Chiso changu chichaenda.”
^ ChiHeb., “Kana chiso chenyu chisiri.”